Ndị mmadụ hụrụ ndị mmadụ n'anya - WRSP
Ndị mmadụ hụrụ mmadụ n'anya
NDỊ NDỊ NA-ECHI NDỊ NDỊ ANYỊ CHINEKE CHINEKE
NDỊ NA-AHỤ NDỊ NDỊ ANYỊ CHINEKE CHINEKE NA-AHỤ
1924 (Jenụwarị 22): A mụrụ Albert Wagner na Crittenden County, Arkansas.
1937: A manyere Wagner ịrụ ọrụ iji lekọta ụmụnne ya na nne ya.
1941: Wagner kwagara Cleveland ebe ọ ga-ebi ruo oge ndụ ya niile.
1942: Wagner hụrụ ịhụnanya maka ndụ ya, Magnolia, bidoro ezinụlọ wee hiwe ụlọ ọrụ na-agagharị.
1962: Magnolia hapụrụ Albert mgbe ọ chọpụtasịrị ekwesịghị ntụkwasị obi nke Albert.
1974: Wagner nwere mkpughe n'ime okpuru ulo ya, wezuga ya site n'uzo ojo ya rue ndu nke ndu site na oru aka ya.
1980: Wagner batara n'ụlọ nke ga-abụ etiti nke ozi ya nke a maara ugbu a dị ka The People Love People House of God.
1998: Mkpụrụ osisi Fruit Avenue dị na Cleveland, Ohio kwadoro ihe ngosi nka kachasị na Wagner.
2006: Wagner nwụrụ mgbe ọ gwụchara ihe osise na ihe osise 3,000 n'oge ọrụ 32.
A mụrụ Albert Wagner na January 22, 1924 na Crittenden County, Arkansas. Wagner gosipụtara ọchịchọ uche na mbido Afọ mana a manyere ya ịrụ ọrụ mgbe ọ gbara afọ iri na atọ iji kpata ụmụnne ya nwoke atọ na nne ya. Ọ gụrụ akwụkwọ naanị na klas nke abụọ. Mama Wagner ji okpukpe kpọrọ ihe, wee nye usoro okpukpe mmalite maka nkwenkwe Wagner. Mgbe Wagner dị afọ iri na asaa, dịka onye isi ezinụlọ, ọ kpọgara ezinụlọ ya na Cleveland ịchọ ọrụ. N'oge na-adịghị anya, na 1942, Wagner lụrụ "ịhụnanya maka ndụ ya," Magnolia, ma n'otu oge ahụ malitere ezinụlọ na azụmahịa na-akpụ akpụ ngwá ụlọ (Miller 2008).
N'ime afọ iri na ise sochirinụ nke ndụ Wagner, ọ hapụrụ nkwenkwe okpukpe nke nne ya wee bụrụ onye maara ihe "ụwa." N'okwu Wagner, “Mmekọahụ jidere m ma kee m agbụ. M dị ka Wolfman. Oge nke na aghugho nke oke ochichiri batara imi m, o di ka m nwere nku. Ahụ m gakwuuru anụ ọhịa ahụ. ” Ọchịchọ ya nke agụụ mmekọahụ dugara n'agha ya ma mee ka Magnolia hapụ ya na 1962. N'ime oge a, Wagner nọ na-akwado ezinụlọ atọ na ụmụ iri abụọ, iri na ise n'ime ha na nwunye ya, Magnolia, tupu ọpụpụ (Kangas 2008) ).
Ọnụnọ nke nwunye ya nke afọ iri abụọ zigara Albert n'ọkwa dị ala, nke a ga-atụgharị n'abalị nke ụbọchị ọmụmụ ya nke iri ise. Wagner na-enye akuko nke aka ya banyere abali a si, “Ana m akwado maka oriri m ma m banye n’ime ulo. Enwere bọọdụ ochie a n’elu ụlọ nke nwere ite na ya. Nnukwu osisi ahụ malitere ịgwa m okwu. '” Oge ochie osisi a, Albert kwuru, gwara ya okwu, na-agwa ya na eserese na nka ga-eweta ụzọ nzọpụta. Ntem ke Albert Wagner ọkọtọn̄ọ utom ukwọrọikọ esie ke ofụri eyouwem esie. Ihe osise mbụ ya, nke ọ malitere n’abalị ahụ, ka a kpọrọ “Ọrụ ebube n’etiti abalị” na-egosi mkpughe ya ma laghachi na ụdị nke okpukpe ya n’oge gara aga. N'otu abalị, Wagner gbanwere site na onye ọchụnta ego nwere ihe ịga nke ọma, na-agbagha aha atọ na ezinụlọ, wee bụrụ onye ozi, nna, na onye omenkà nwere mmasị (Miller 2008).
Mgbe mkpughe Wagner gasịrị, ọ gara n'ihu ghọọ onye ozi a họpụtara ahọpụta ma tinye oge fọdụrụ nke ndụ ya na eserese, ezinụlọ, na ozi nka ya. N'okwu nke aka ya, "Kemgbe ndụ m, m chọrọ agba, amaghị m etu. Chineke na-enye ntụzịaka ma ị ga-agbaso ha. ” Helọ ọ kwagara na Cleveland na 1980 gbanwere site na ụlọ a na-edozikarị ya ka ọ biri ebe obibi nke ọrụ nkà ya. Nkà ya wee buru akuko nke onwe ya na uzo iji kuzi ihe ma zoputa ndi ozo site na nzoputa nke aka ya. Hislọ ya, nke a kpọrọ ndị mmadụ hụrụ ndị mmadụ n'anya bụ ụlọ nke Chineke, ghọrọ ebe kachasị mkpa nke ọrụ omenaala ya.
Site na mgbe ọ nwụrụ na September, 2006, Albert rụchara ihe ngosi 5,000. A na-emepụta nkà ya, site na foto nke Queens Afrika, na-agbapụ na South South, igbu ọchụ nke ụmụ amaala America, ikpogide Kraịst, na ahụhụ nke ndị Africa America. Ihe osise ya na-egosi ngwakọta akụkọ ihe mere eme na ahụmahụ ya (Cohn 1998: 80). Albert Wagner nwere nkà egosi na Museum Art Museum na Baltimore, Maryland na ọtụtụ n'ime ihe ndị ọzọ ọ na-eme ka echekwara ya na Albert Wagner Museum na Creekside Art Gallery dị na Concord, Ohio. Ndị ezinụlọ Kanga, ndị enyi na-adị ndụ ogologo oge nke Wagne, na-echekwa ụlọ ahịa a ma tinyekwa akụkọ ndụ Albert Nwa Mmiri: Art na Ndụ nke Albert Lee Wagner (Kangas 2008).
Mgbe e mesịrị ntọghata ya, Albert Wagner, dịka nne ya nke okpukpe, na-azọrọ na ya bụ onye na-abụghị ndị Kraịst ma ghọta na Jizọs Kraịst dịka Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta. Ọ ghọrọ onye ozi a họpụtara ahọpụta site na chọọchị ahụ a kpọrọ "Ndị na-edebe Iwu." Wagner lekwasịrị anya ná ndụ ya niile maka ịme ihe omume "ụwa" ya n'oge gara aga site na nkà na ozi ya. Wagner na-edebe Kosher, na-edebe Ụbọchị Izu Ike site na abalị Fraịdee ruo ụtụtụ Saturday, ma na-elekwasị anya n'ozi ya na "ihe ngwọta maka ihe ọ na-ahụ dịka ọnọdụ nke Black ojii." N'ezie, ọtụtụ ozi ya jupụtara agbụrụ agbụrụ ndị kewapụrụ otu akụkụ dị mkpa nke obodo Amerịka. N'oge ọ bụla ọ na-arụ ọrụ, Wagner "na-ebo Black Black nke mmegbu onwe onye, ​​ileghara ibu ọrụ, na adịghị ike maka agụụ mmekọahụ" (Miller 2008).
N’okwu nke aka ya, Albert na-ekwu, “Anyi [onye ojii ahụ] kwesiri ihu ezigbo mgbaghara nke nsogbu anyị niile. Ihe kpatara ya adịghị na akụkọ ntolite America, ọ bụghị n'oge ịgba ohu ma ọ bụ ikpe na-ezighị ezi ọ bụla ọzọ, kama ọ laghachitere n'oge ochie. Etiopia mehiere; ọ dị na Baịbụl. Anyị mere ihe arụ n'anya Chineke. Nke a bụ ozi m ugbu a, ime ka ndị m gbuo ikpere n'ala ma rịọ ya mgbaghara. " Ọzọkwa, Wagner kwenyere na "onye ojii ahụ nwere ọrịa mmekọahụ, karịa ndị ọzọ ọ bụla n'ụwa." N’akwụkwọ ya nke akpọrọ “American History,” e gosipụtara atụmatụ nke onye isi ojii mana karịa ịchụ ụdị ihe ahụ na-akpali agụụ mmekọahụ n’ebe ndị ọcha ahụ nọ, ọ na-atụnye isi okwu ahụ n’etiti ndị Africa America: “Anyị agaghị ekwe ka ihe mere wee kpochapụ anyị nke eziokwu nke taa ”(Leland 2001).
N'ihi nkwupụta ya na nkatọ ya banyere obodo ndị Amerịka, ọ natala nkwado dị ukwuu n'aka ndị ọcha na ndị na-achịkọta ihe ebe ọ bụ na ndị Amerịkà Amerịka jụrụ. Na nzaghachi na mmeghachi omume a, Wagner kwuru, "Enwere m ọtụtụ ihe m chọrọ inye ndị m, mana ha anaghị anabata ya. Ha anaghị ahụ m n’anya n’ihi ihe m na-ekwu. Abụ m Deede Tom. Onye ọ bụla bụ Deede Tom na-agwa anyị ka anyị bilie meere onwe anyị ihe. ” Mmetụta a, emeela ka aka ya onwe ya nye Moses (gosipụtara na eserese kachasị mkpa na ndị mmadụ hụrụ ụlọ ndị mmadụ n'anya) akwa akwa ụkwụ iri na anọ nke Moses duru ụmụ Israel pụọ n'Ijipt. Mgbe Wagner na-ezighi ike ikwupụta mmụọ nsọ amụma, ọ na-ekwu maka mkpali Mosaic na nka na ozi ya. Wagner kwuru, "Enwere ike n'ụzọ ụfọdụ, Onyenwe anyị kwere ka m nwee ọ theụ ma ọ bụ nhụjuanya nke Moses nwere, ya mere enwere m ike ikwupụta echiche ya" (Leland 2001).
Na mkpokọta, Wagner chọrọ ịzọpụta ndị furu efu ma na-etinye aka na ọnwụnwa "ụwa", dịka ọ dị, site na nka ya na ozi ya na ndị mmadụ hụrụ ndị mmadụ n'anya n'ụlọ Chineke. O lekwasịrị anya nke ọma na obodo ndị Africa America, na-ekwusara ya ozi nke inye ike, na-asị, "Enweghị m ike ihichapụ akụkọ ihe mere eme, mana akụkọ ihe mere eme na-ehichapụ anyị. Anyị na-eji akụkọ ihe mere eme dị ka ihe ngọpụ ”(Leland 2001).
Ndị mmadụ hụrụ ndị mmadụ n'anya n'ụlọ Chineke meghere emeghe maka ọha na eze n'oge ọrụ Wagner. Ọ bụ ụlọ nwere okpukpu atọ gbasara nkeji iri na ise n’Ọwụwa anyanwụ nke obodo ndịda Cleveland. A makwaara dị ka Wagner Museum, ndị mmadụ hụrụ ndị mmadụ n'anya n'ụlọ Chineke mere emume Satọde ọ bụla maka ụbọchị ahụ. Ọ bụ ndị òtù ezinụlọ ya na ndị agbata obi ya ka ọtụtụ ndị nọ n'ọgbakọ ahụ, ọ bụ ezie na ọrụ ya nwere ike iru ihe ruru otu narị mmadụ na-abụ abụ, ịgba akaebe, na ikwusa ozi ọma. Ọ bụ ezie na Wagener zere ịkpọ onwe ya onye amụma, ọ kwadoro izi ezi nke obodo ndị America America na-agbagha nkuzi ya site n'ikwu, "Onye amụma ọ bụla bụ onye nzuzu nye ọtụtụ mmadụ. Ọ bụrụ na ọ nọghị, ọ gaghị adị mkpa ka ibu amụma ”(Miller 2008).
Ozi na nka Wagner bụ nzuzu, na-agwakọta nkwenkwe okpukpe ya, ahụmịhe onwe ya, na ebumnuche ya niile. Tupu ya anwụọ, Wagner kọọrọ ndụ ya, ọrụ ya, na ozi ya site n'icheta, "Afọ niile a agafeela kemgbe m bụ obere nwa nwoke ahụ n'ọnụ ụzọ nne m, ma ugbu a amatara m na naanị ihe m chọrọ ime bụ ite agba. Anaghị m achọ ime ka m dị iche na onye ọ bụla, mana Chineke mere m ihe m bụ, ọ dịkwa m mkpa iwebata ụwa ojii, ụmụnne m ndị obere ojii na ụmụnne m, na ị nwere ike ịnara televishọn ochie, na stovu ochie, ihe ọ bụla ịchọrọ, ma mee ya ihe ọkpụkpụ. Ọbụna ala nke drawer ochie, ọnụ ụzọ ma ọ bụ windo. Na mbu, echere m na o nweghi ihe m ga-arụ, ma mgbe ahụ achọpụtara m na ihe niile m chọrọ bụ n'okporo ámá ma ọ bụ n'okporo ụzọ. Ihe niile dị ebe a bụ nke gluu Elmer, ezi uche, onyinye ndị mmadụ na n'okporo ámá. Yabụ ugbu a enwere m ụlọ ngosi ihe nka niile igosi ụwa ”(Miller 2008). Rev. Wagner chọrọ ịnọgide na-ele ọbịa nke obodo Cleveland ya nke ọma wee mee nke a site na imepe ụlọ ya ka mmadụ niile banye. Agbanyeghị na emechiri ọnụ ụzọ ụlọ Wagner ugbu a, ndị enyi ya niile, ezinụlọ Kangas, chebere ozi ya, nka, na ndụ ya na Creekside Art Gallery dị na Concord, Ohio (Kangas 2008).
Ọ bụ ezie na o siri ike ịkọwa n'ụzọ doro anya emume na omume nke ndị Albert Wagner People People Love People of God, enwere ụfọdụ akụkụ dị mkpa nke omume okpukpe ya. Wagner kwadoro idebe Kosher ma debe Sabbathbọchị Izu Ike site na abalị Fraịde ruo Satọde mgbe anyanwụ dara. Na Sọnde, ndị mmadụ hụrụ Peoplelọ Chineke n'anya mepere emepe ụbọchị niile ma Wagner kpọrọ mmadụ niile ka ha sonye na ọhụụ ya pụrụ iche nke ofufe site na eserese (Miller 2008). Rev. Wagner jụrụ isonye na ezumike ọ bụla nke ndị ọgọ mmụọ ma lekwasị anya na nkwusa ya na ike niile, site na nka na ahụmịhe ya, iji zere mmehie na mmebi iwu.
Reverend Wagner bụ onye na-agbagha agbagha, ọ bụ ezie na mkpuchi ọha na eze na okwu ya ma ọ bụ ịnụ ọkụ n'obi okpukpe abụghị obere. Ọ na-ewepụkarị obodo Africa-America site na nkatọ doro anya nke "onye ojii" ahụ sitere na ahụmịhe ya na mbibi mbụ ya (Leland 2001). Otutu n'ime okwu ya ka egosiputara ma gbasasia, dika ima atu, Wagner kwuru, "Ekwere m na nwoke ojii ahụ nwere ọrịa mmekọahụ, karịa ndị ọzọ nọ n'ụwa" (Leland 2001). N'oge dị iche iche akpọrọ ya "Uncle Tom," ma zaghachi ebubo ndị dị otú a site n'ịsị, "Enwere m ọtụtụ ihe m chọrọ inye ndị m, mana ha anaghị anabata ya. Ha anaghị ahụ m n’anya n’ihi ihe m na-ekwu. Abụ m Deede Tom. Onye ọ bụla bụ Deede Tom na-agwa anyị ka anyị bilie ma mee onwe anyị ihe ”(Leland 2001). Na mkpokọta, nnabata Wagner nke ndị ọcha na ịkatọ omume ndị Africa na Amerịka bụ akụkụ esemokwu nke ebumnuche ya iji zọpụta ụwa site na nrụrụ aka site na nka ya.
Beal, Timoti. 2008. Okpukpe na America: Okwu Nkụkụ Dị Nkpọrọgwụ. New York: Oxford University Press.
Cohn, Nik. 1998. "Okwukwe na Paint." Magazin ndụ (May): 79-80.
Kangas, Gene na Linda Kangas, eds. 2008. Nwa Mmiri: Art na Ndụ nke Reverend Albert Lee Wagner . DVD.
Leland, John. 2001. "N'ụlọ na Rev. Albert Wagner; Moses nke East Cleveland, tinyere Detours. " The New York Times (January 25).
Miller, Thomas (Director). 2008. Otu Bad Cat: Akụkọ Albert Wagner. DVD.
Ritchey, Debbie. 1996. "Ihe si na Alley: Ọrụ nke Rev. Albert Wagner." Akwụkwọ akụkọ nke Art Society nke America 9: 1-4.